काठमाडौँ महानगरले थाल्यो रात्रीकालीन सहरी सौन्दर्य कार्यक्रम, माइतीघर मण्डलाबाट परीक्षण – SunkoshiNews
यसबाट सन्ध्याकालमा बाहिर निस्कने र रात्रीकालीन जीवन पछ््याउनेहरुलाई आनन्दित बनाउँछ । यस्तै रात्रीकालीन सहरी सुन्दरतालाई बढाउँछ । सहसचिव ज्ञवाली भन्नुहुन्छ — यसबाट सहरबासीले समृद्धिको अनुभूति गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । माइतीघर मण्डलाको झिलीमिलीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि महानगर आगामी दिनमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल र सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरुमा क्रमश यस्ता बत्ती जडान गर्दै जाने योजनामा छ । सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार ‘केही ठाउँमा महानगर आफैंले र केही ठाउँमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बत्ती जडान हुनेछन् । झिलीमिली काठमाडौं कार्यक्रम रातमा पनि जागा सहरको सूचक हो । यसले रात्रीकालीन व्यवसायबाट अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन टेवा पु¥याउँछ ।
महानगरले फुटपाथ पसल सञ्चालनमा रोक लगाएर सडक किनारालार्य पैदल यात्रामैत्री बनाउने योजना बनाएको छ । सडक किनारामा हिँड्दा आनन्दको अनुभूति गराउन रात्रीकालीन झिलीमिलीको ठूलो भूमिका हुनेछ । माइतीघर मण्डलाबाट अब तीनकुनेसम्मको सडक किनारामा झिलीभिली बनाइनेछ । त्यसपछि क्रमशः नयाँ सडक, दरबारमार्ग, ठमेललगायत क्षेत्रमा पनि बत्ती जडान गरिनेछन् । महानगरले आगामी बर्षमा रङ्गीचङ्गी बत्ती जडानका लागि करीब ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आउँदो असोज – कार्तिक महिनासम्ममा सहरका पाँच–सात ठाउँमा बत्ती जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आ. व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बत्तीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राखेको छ । प्रमुख चोकहरुमा आधुनिक सिग्नलाईज्ड प्रणालीमा आधारित ट्राफिक लाईट जडान गरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउने, मेयर उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने, मुख्य चोकहरुमा हाइमास बत्ती जडान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
सांस्कृतिक रुपमा अन्तरसम्बन्ध रहेका मण्डला र बत्तीलाई झिलीमिली काठमाडौं कार्यक्रमको परीक्षणका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसबाट सबैले लाभ हुने, सबैलाई अपनत्व ग्रहण हुने परिणाम आउने महानगरले अपेक्षा गरेको छ ।-चन्द्रमणि भट्टराई